'Ruux kasta oo Soomaaliya ku dhinta wuxuu u geeriyooday Fayraska Corona' - BBC News Somali
'Ruux kasta oo Soomaaliya ku dhinta wuxuu u geeriyooday Fayraska Corona'
1 Maajo 2020
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye
Wasiirka Warfaafinta ee Xukuumadda Federaalka, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa shir jaraa'id oo uu shalay qabtay ku sheegay in fayraska uu si baaxad leh ugu fiday Soomaaliya.
"Xanuunkan khatarta ah Soomaaliya wuu soo gaaray, magaalada Muqdisho ayuu hadda ugu saameyn badan yahay, laakiin wuu fidayaa, gobollada dalkana wuu ku faafayaa," ayuu yiri Wasiir Maareeye.
"Qof kasta wuxuu dhahayaa malaariyo ayaa i heysa, ama waxaa la leeyahay qofkaas wuxuu u dhintay malaariyo, cagaarshor - waxaasoo dhan waxba kama jiraan - dowladda Soomaaliya qof kasta oo maanta dhinta waxay u aqoonsan tahay inuu coronavirus dilay, maadaama uu majority (cudurka ugu bada) yahay. Marka ogaada qof kasta oo dhintay waxaan u aqoonsan nahay inuu coronavirus dilay, markii uu cudurkan naga baxo halkii caadiga ahayd halagu noqdo", ayuu yiri Wasiir Maareeye.
"Soomaaliya heerka dhimashada aad buu u sarreeyaa, waa xaqiiq jirta"
Afar arrimood oo ku saabsan xaaladda coronavirus ee Soomaaliya
"Walaalayaal xanuunkan daaweyn toos ah maleh - sida ay dhakhaatiirtu sheegeen - daaweyntuusy waa inaad taxadarto oo xanuunka aad ka badbaadiso naftaada, qoyskaaga, ehelkaaga iyo shacabka Soomaaliyeed. Siyaabaha looga badbaadi karo aad bay u sheegeen dowladda Soomaaliya iyo dhakhaatiirtuba, wasaaradda caafimaadkana u sheegtay. Waxaa ugu horreeya inaad maaskaraati xirato mar kasta oo aad meel dadku ku badan yahay tageyso, inaadan dadka salaamin, inaadan hab siinin, inaadan ku quficin ama ku hindhisin," ayuu yiri.
Cabdirisaaq Yuusuf Axmed
"Soomaaliya heerka dhimashada aad buu u sarreeyaa, waxaana sabab u ah nidaamka iyo system-ka caafimaadkeenna oo la ogyahay inuu liito iyo dadkeenna oo aad uga madax adeygay inay wacyigalinta iyo ka hortagga qaataan, sidoo kale waxaa yar awoodda baarista, waxaan aaminsan nahay inuu cudurku aad ugu jiro dalka oo dhan, gaar ahaan magaalada Muqdisho, oo aysan awooddeenna gaarin in ruux walba ama guri walba la baaro," ayuu yiri.
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Fowziya Abiikar Nuur
Masaajidka Isbahaysiga Islaamka ayaa maanta salaaddii Jimcaha lagu tukaday iyadoo dadku ay kala fogaanayaan
"Masaajidda inaan la imaanin asal ahaanba, oo guryaha lagu tukado ruqso ayaa loo heystaa, waa inaad arrintaas ogaataan. Muslimiintu marka ay cudurradaan oo kale yimaadaan waligood ma aysan dhihin masaajidda hala xiro - laakiin waa laga tagi jiray dhammaan masaajidyada", ayuu yiri Sheekh Cali Wajiis.